५ मिनेटमा ३० वर्षे पुरानो ग्यास्ट्रीक पनि निको पार्ने के हो यो अचुक औषधि ? – || Aru K Cha ||
Home/स्वास्थ्य / शिक्षा/स्वास्थ/५ मिनेटमा ३० वर्षे पुरानो ग्यास्ट्रीक पनि निको पार्ने के हो यो अचुक औषधि ?
स्वास्थस्वास्थ्य / शिक्षा
५ मिनेटमा ३० वर्षे पुरानो ग्यास्ट्रीक पनि निको पार्ने के हो यो अचुक औषधि ?
ग्यास्ट्राइटिस भएकाले एसिडिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
जसमा कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप असर पु-याउँछ । टमाटरमा पनि एसिडिक हुने भएकाले ग्यास्ट्राइटिसले दिने पीडालाई बढोत्तरी गर्छ ।
कसै–कसैले यसको थोरै प्रयोगले त्यति असर नगर्ने भए पनि खाँदैनखानु उत्तम हुन्छ । दूध र दूधजन्य पदार्थ पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । दूधमा हुने प्रोटिनले पेटको भित्री भाग सुन्निने हुन्छ । यसका साथै यसले पेटमा एसिडको मात्रा बढाउँछ । तर, दही भने फाइदाजनक हुन्छ ।
ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित मानिस चिया र कफीबाट पनि बच्नुपर्छ । चियापत्ती र कफीमा हुने क्याफिनले ग्यास्ट्राइटिसको असरलाई बढाउने काम गर्छ । अझ दूधचिया खाँदा दूध र क्याफिन दुवैले ग्यास्ट्राइटिसलाई झन् बिगार्ने काम गर्छ । तर, ग्रिन–टीको सेवनले भने ग्यास्ट्राइटिसको सम्भावना ४० प्रतिशत कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ग्यास्ट्राइटिसको समस्यापछि मसलेदार खानेकुराले समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गर्छ । यद्यपि, मसलेदार खानेकुरा आफैँले ग्यास्ट्राइटिस गराउन भने त्यति धेरै भूमिका खेल्दैन ।
राप्रपा रुपन्देहीद्वारा शुद्धोधनआइसोलेसनमा स्वास्थ्य सामग्री एव पौस्टिक आहार प्रदान
रुपन्देहीमा निषधाज्ञा जेठ ३१ गतेसम्म थप